အင်္ဂလန်အသင်း အပြီးသတ်လူစာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အလက်ဇန္ဒားအာနိုးလ် - Fox Sports Myanmar
အင်္ဂလန်အသင်း အပြီးသတ်လူစာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အလက်ဇန္ဒားအာနိုးလ်
အင်္ဂလန်အသင်းနည်းပြ ဆောက်ဂိတ်ကတော့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်ကစားမယ့် (၂၃) ဦးအပြီးသတ်လူစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာတော့ အသက် (၁၉) နှစ်အရွယ် အလက်ဇန္ဒား အာနိုးလ်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ ၀ါရင့်ဂိုးသမားဖြစ်သူ ဂျိုးဟတ် နဲ့ အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်လူ ၀ီလ်ရှိုင်းယားတို့ လူစာရင်းကနေ ချန်လှပ်ခံခဲ့ရပြီး ဂယ်ရီကာဟေးလ်ကတော့ အသင်းလူစာရင်းမှာ ပြန်လည်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီကစားသမားတွေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လူစာရင်းကနေ နှုတ်ထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အစားထိုးနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားခဲ့လူစာရင်းကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့ရာမှာ လီဗာပူးလ် ကွင်းလယ်လူ လယ်လာနာ ၊ ဘန်လေဂိုးသမား တွမ်ဟီတန် နဲ့ နောက်ခံလူ တာကောစကီး ၊ ဘုန်းမောက်ကွင်းလယ်ကစားသမား လီဝစ်ကွတ် ၊ ၀က်စ်ဘရွန်း ကွင်းလယ်ကစားသမား လစ်ဗာမိုးလ်တို့ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလန်အသင်းကတော့ အုပ်စု G မှာ ပနားမား ၊ တူနီးရှား ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ အသင်းတွေနဲ့ ကျရောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းအတွက် လူစာရင်းထုတ်ပြန်ခဲ့အပြီးမှာတော့ ဆောက်ဂိတ်က ပြောကြားရာမှာ “ ဒီလူစာရင်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်မိပါတယ်။”
“ လူငယ်ကစားသမားတွေ များစွာပါဝင်နေခဲ့ပေမယ့် အရေးပါတဲ့ စီနီယာကစားသမားတွေလည်း ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ဒ့ါကြောင့် အတွေ့အကြုံပိုင်း နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာ မျှတတဲ့လူစာရင်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ ခံစားရပါတယ်”
အလက်ဇန္ဒား အာနိုးလ်ကို အသင်းလူစာရင်းမှာ ထည့်သွင်းခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ အာနိုးလ်အတွက် ပထမဆုံးခေါ်ယူခံရမှုဖြစ်ပေမယ့်သူ ဒီအရာနဲ့ ထိုက်တန်ပါတယ်။လူငယ်ကစားသမားတွေကို ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာ ငယ်ရွယ်မှုကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး၊ ပွဲထွက်ခွင့်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ခြေစွမ်းကို ပြသထားနိုင်လို့ပါ” ဆိုပြီး ဆောက်ဂိတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလန်အသင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အပြီးသတ်လူစာရင်း
ဂီုးသမား – Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley).
နောက်တန်း – Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Kyle Walker, John Stones (Manchester City), Harry Maguire (Leicester), Kieran Trippier, Danny Rose (Tottenham Hotspur), Phil Jones, Ashley Young (Manchester United).
ကွင်းလယ် – Eric Dier, Dele Alli (both Tottenham Hotspur), Jesse Lingard (Manchester United), Jordan Henderson (Liverpool), Fabian Delph (Manchester City), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea).
ရှေ့တန်း – Jamie Vardy (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal) Harry Kane (Tottenham).
အရံကစားသမားစာရင်း – Tom Heaton, James Tarkowski (Burnley), Lewis Cook (Bournemouth), Jake Livermore (West Brom) and Adam Lallana (Liverpool).
Home Football အင်္ဂလန်အသင်း အပြီးသတ်လူစာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အလက်ဇန္ဒားအာနိုးလ်